မြစ်ဆုံအရေး မြန်မာအစိုးရထံ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးမှ ဖိအားပေးပြန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Environment » မြစ်ဆုံအရေး မြန်မာအစိုးရထံ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးမှ ဖိအားပေးပြန်
မြစ်ဆုံအရေး မြန်မာအစိုးရထံ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးမှ ဖိအားပေးပြန်
Posted by koyin sithu on Oct 3, 2011 in Environment, Myanma News | 16 comments
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆိုင်းငံ့ထားမည်ဟု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြောဆိုခဲ့ပြီး နောက်တနေ့တွင် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သည့် ကုမ္ပဏီတို့၏ အကျိုးစီးပွားရေးကို ထိန်းသိမ်းပေးရန် မြန်မာအစိုးရကို တုံ့ပြန် ပြောဆိုလိုက်သည်။
စီမံကိန်းအတွက် နှစ်နိုင်ငံ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းပြီးမှ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း၊ လိုအပ်သော သိပ္ပံဆိုင်ရာ လေ့လာမှုများကို သေချာ ကျနစွာ ဆောင်ရွက်ပြီးမှ စီမံကိန်း စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း စနေနေ့က ထွက်ပေါ်လာသည့် တရုတ် နိုင်ငံခြားရေးဌာန ထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုသည်။ စီမံကိန်းအား ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားများ အဆက်မပြတ် ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်နေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တစုံတရာ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေ။
ဦးသိန်းစိန်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို တရုတ်နိုင်ငံက ထိုသို့ တုံ့ပြန်သော်လည်း အမေရိကန်အစိုးရကမူ မြန်မာပြည်သူတို့၏ အသံကိုအလေးထားပြီး ထိုသို့ ဆုံးဖြတ်ခြင်းကို ကြိုဆိုသည်ဟု ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
တရုတ်နှင့်မြန်မာ အစိုးရတို့သည် ထိုစီမံကိန်းအတွက်၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ စတင်ခဲ့သည်။ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း မည်မျှအထိ ပြီးစီးနေကြောင်းကို နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရများက ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးပေ။
ဤအတောအတွင်း မြစ်ဆုံဒေသ စီမံကိန်းကို ဦးဆောင်ခဲ့သော တရုတ် China Power Investment (CPI) ကုမ္ပဏီက ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းအတွင်း အစီရင်စာတစောင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ထိုအစီရင်ခံစာတွင် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှု နည်းပါးကြောင်း၊ ဒေသစီးပွား တိုးတက်လာမည်ဖြစ်၍ စီမံကိန်းကို ဒေသခံ ကချင် လူထု ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က ထောက်ခံကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ စီမံကိန်းပြီးစီးသည့်အခါ ပြောင်းလဲလာသည့် သဘာ၀၀န်းကျင်အနေအထားကြောင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးလာမည်ဟု ဆိုသည်။
ထိုအစီရင်ခံစာပါ အချက်များကို ကမ္ဘာ့မြစ်များ ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ (International Rivers Network – IRN) က လက်ခံခြင်း မရှိပေ။
“အစီရင်ခံစာမှာ ပြောထားတဲ့ ဇီဝမျိုးစိတ်တွေကို နေရာပြောင်းလို့ရတယ် ဆိုတာဟာ မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါ၊ ဇီဝ မျိုးစိတ်တွေ၊ ရှားပါးတဲ့ ရေနေ၊ ကုန်းနေ သတ္တ၀ါတွေ၊ အပင် မျိုးစိတ်တွေ စတဲ့ ဂေဟစနစ်တွေကို တနေရာက တနေရာကို ပြောင်းရွှေ့လို့ မရပါဘူး” ဟု IRN မှ ဥပဒေပညာရှင် တရုတ်အမျိုးသမီး Ms. Grace Mang က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းများ တည်ဆောက်ရာ၌ အဆင့် ၅ ဆင့် ပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့ ရရှိသည့် မှတ်တမ်းများအရ အဆင့် ၂ ဆင့် ပြီးမြောက်နေပြီဟု သိရကြောင်း၊ CPI ကုမ္ပဏီက နောက်ဆုတ်ပေးရန် အလားအလာမရှိကြောင်း သူက ရှင်းပြသည်။
မြန်မာပြည်မှ သဘာပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးသမား ဦးအုန်းကလည်း CPI ကုမ္ပဏီ၏ အစီရင်ခံစာကို ရေးသား ထုတ်ပြန်သူများသည် ပညာရှင် အစစ်အမှန်များ မဟုတ်ဘဲ ကုမ္ပဏီ ကိုယ်စားပြုသူများသာ ဖြစ်သည့်အတွက် ထိုသို့ တာဝန်မဲ့ စကားပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်လိုက်သည်။
“မြစ်ဆုံတ၀ိုက်မှာ ရှားပါးမျိုးစိတ် ရာချီရှိတယ်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှု ပမာဏများတယ်၊ ဒါ့အပြင် တရုတ်(နိုင်ငံ)ရဲ့လုပ်ရပ်ဟာ မြန်မာတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ ရိုးရာဒေသ ဓလေ့တွေပါ စော်ကားတဲ့ သဘောပါပဲ၊ ကျနော် နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ မြစ်ဆုံတ၀ိုက်ကို တရုတ်တပြည်လုံးနဲ့ မလဲနိုင်ဘူးလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်” ဟု ဦးအုန်းက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးနိုင်မည့်ပမာဏ ကြီးမားသည်ဟု တရုတ်ပညာရှင် အစစ်အမှန်များက လေ့လာ သုံးသပ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ဦးအုန်းက ဆက်လက် ရှင်းပြသည်။
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဌာန၏ တုံ့ပြန်ချက် စနေနေ့တွင် ထွက်ပေါ်လာသော်လည်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ အကြံပေးတဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာနေဇင်လတ်ကမူ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ထိခိုက်ဖွယ်မရှိဟု ဆိုသည်။
စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ နှစ်နိုင်ငံအစိုးရအကြား လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ဆွေးနွေးမှုများရှိကြောင်း၊ ရေရှည်အရ ကောင်းသည့်ဘက်ကိုသာ ဦးတည်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ်ကုမ္ပဏီများ နှင့် မြန်မာအစိုးရကြား ဆက်လက်ညှိနှိုင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာနေဇင်လတ်က ဘီဘီစီ သတင်းဌာနကို ပြောသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကလည်း စီမံကိန်းကို လက်ရှိအစိုးရသက်တမ်းတွင် ဆိုင်းငံ့ထားမည်ဟုသာ ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျောက်ဖြူစီမံကိန်းသည် တရုတ်နှင့်မြန်မာအစိုးရတို့ အတွက် နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး၊ စီးပွားရေး မဟာဗျူဟာကျသည့် စီမံကိန်းဖြစ်သည့်အပြင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်း၊ အမြန်ရထားလမ်း စီမံကိန်းတို့သည်လည်း နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် အရေးပါသည်ဟု ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့ လှုပ်ရှားမှု ဆန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့ တာဝန်ခံ ကိုဝင်းအောင်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့ စီမံကိန်း စာချုပ်အရ စီမံကိန်းမှ ထွက်သည့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့အားလုံးကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့မည်ဟု သိရသည်။
ရခိုင်ကမ်းလွန် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ၁၀၀ ကုဗမီတာအား အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းများ၊ အစိုးရနှင့် နီးစပ်သည့် ကုမ္ပဏီများ အတွက် အသုံးပြုသွားရန်ရှိကြောင်း ကိုဝင်းအောင်က ပြောသည်။ဧရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆိုင်းငံ့ထားမည်ဟု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြောဆိုခဲ့ပြီး နောက်တနေ့တွင် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သည့် ကုမ္ပဏီတို့၏ အကျိုးစီးပွားရေးကို ထိန်းသိမ်းပေးရန် မြန်မာအစိုးရကို တုံ့ပြန် ပြောဆိုလိုက်သည်။
ရခိုင်ကမ်းလွန် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ၁၀၀ ကုဗမီတာအား အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းများ၊ အစိုးရနှင့် နီးစပ်သည့် ကုမ္ပဏီများ အတွက် အသုံးပြုသွားရန်ရှိကြောင်း ကိုဝင်းအောင်က ပြောသည်။a
အက်ဒ်မင်မှတ်ချက်။ ။ http://www.bur.irrawaddy.org/index.php/news/7476-2011-10-03-12-02-06
မိမိ၏ သုံးသပ်ချက်မပါပဲ.. ပြည်ပမြန်မာမီဒီယာများ၏သတင်းကိုတိုက်ရိုက်မကူးတင်ပါရန်။
သုံးသပ်ချက်ပါလျှင်လည်း.. လိုအပ်သော Credit အပြည့်အ၀ပေးပါရန်။
ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်လာဦးမလဲ မသိတော့ပါဘူး၊ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ စေဖို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
ဟ ဟ .. ချီးစားပီးတော့ ပေါပါ စီလုပ် ၀ံကျီးရယ် ..
လက်တစ်ဆုပ်စာ ကုမ္ပဏီကိုတော့ မြင်တယ် ..
သန်း ၆၀ – ရှိတဲ့ ပြည်သူတွေတော့ မမြင်တော့ဘူးလား ..
အံ့ရော .. အံ့ရော ။
၁။မြေကြီး (ကျောက်သံရတနာ၊ ရေနံ…. )၊
၂။ သစ်ပင် (ကျွန်း.. အစရှိသောသစ်)
၃။ ရေ (ရေအားလျှပ်စစ်၊မြစ်ကြောင်း×
၄။ လေ (ဂက်စ်.. ဓါတ်ငွေ့)
နောက်ထပ်ဘာတွေ တို့ရွှေပြည်ဆီက ပရိယာယ်မျိုးစုံနဲ့ ၀ါးမျိုအုန်းမလဲ ကိုတီလုပ်ကြီးတို့ရေ….
၅ နှင့် ၆ ကို သိသူများရှိရင် ဖြေပေးခဲ့ပါဗျာ..
၆။ တိရိစ္ဆာန် (ကုန်းနေ၊ ရေနေ)
အူဝဲလို့ မွေးစက လူပဲလို့ တွေးစရာမလို
ဝါးတောင်ကိုကျော် မီးပင်လယ်ကိုဖြတ် .. အဲလေ…
ဟုတ်လယ် စီလုပ်တွေ က ခက်လယ် ၊ ( နငံခြား စီလုပ်ပြောလာ)
နိ ကိုလဲ မီကိဘူး .. ဝ ကိုလဲ မီကိဘူး..
တရုတ်လဲပီသပေတယ် ကိုယ့်ညီကိုရေ။ကုလားလုပ်လဲတူတယ် တရုတ်လုပ်လဲတူတယ်။အကယ်ဒမီ တစ်ပြေးနေတယ်ကြား ရတယ်။
သူတို့ကြိုးစားအားထုပ်လို့ သူတို့ချမ်းသာတာကို သားသားအနေနဲ့ ထောက်ခံပါတယ်
ဒီကိစ္စကြီးကို ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သက်ဆိုင်သူ ဘဘကြီးတွေက
သူတို့အာဏာရဘို့ တစ်ခုတွက် တရုပ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတိုင်ငံတော်ကြီးတွက်
မြန်မာ့သံယံစာတတွေကို သူတို့သဘောနဲ့ထုတ်ရောင်းတယ် ဟိုကလည်းဝယ်တယ်
ဒီလိုထုပ်ရောင်းတော့ တရုပ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတိုင်ငံတော်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံကဘဘကြီးတွေကို
တစ်ကယ် သူတို့သာ မကာကွယ်ပေးရင် ဒီလို ပြည်သူလက်မခံတဲ့ အဖွဲ့စည်းတွေ
တစ်ကယ်ဆို စစ်မှန်တဲ့အစိုးရပေါ်ပေါက်လာမှ သေခြာလုပ်ကိုင်သင့်တာပေါ့
ဒီအချိန်မှာ ပြည်သူတွေလုပ်နိုင်တာက ဒီလို မတရားတဲ့နည်းနဲ့ လုပ်ထားကြတဲ့
ဒီလိုသာပြောတမ်းဆို ဧရာဝတီကိစ္စကိုပြောတာ နဲတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး
ဒီမှာဆို သူတို့နိုင်ထက်စီးနင်းပြုခြင်တဲ့သဘောတွေကို မြင်သာနေပြီနော်
နောက်ပြီးကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံထည်းမှာ မွေးဖွားတဲ့ တရုပ်လူမျိုးတွေအနေနဲ့လည်း
တရုပ်ပြည်က ဒီလို အာဏာ၇ှင်တွေနဲ့ တစ်ဖက်စောင်းနင်းလုပ်ကြတဲ့ စီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မြန်မာနိုင်ငံသားလို့ မခံယူဘဲနဲ့ တရုပ်မုန်းတီးရေးလေးဘာလေးဆိုပြီး
တရုပ်ပြည်နဲ့ အတင်းအမျိုးလိုက်စပ်ပြီး ဆတ်ဆတ်ခါနာနေကြတာတွေကလည်း
တစ်ကယ်ဆို သားသားကတော့ အားလုံးကိုပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသားလို့ဘဲသဘောထားတာ
ခုတော့ သူတို့တွေက ဇာတိပြနေကြပြီ အာဏာ၇ှင်နဲ့မတရားကုန်သွယ်တဲ့
ဒါ့ကြောင့် သူတို့နဲ့ အကျိုးတူ အလုပ်တွေလုပ်ကိုင်ကြရမယ်
ယနေ့တရုပ်နိုင်ငံကြီးက သားသားတို့နိုင်ငံက ဘဘကြီးတွေနဲ့ သဘောတူလုပ်ကိုင်နေတဲ့
ဒီနေ့ထိ ဘဘကြီး ရွာသဂျီးပြောသလို တရုပ်နိုင်ငံကလူတွေ ငွေထုပ်ပိုက်ပြီး
သားသားကတော့ သိပ်မသိလို့ ကိုကိုမမ ဦးဦးဒေါ်ဒေါ် ဖိုးဖိုးဖွားဖွား
ဖုန်းဖုန်းနဲ့ ဖွားသီလတွေ အနေနဲ့ သားသားကို ရှင်းပြဂျပါဦး
ဟိတ်ကောင်ငပု လူ့ငပျင်းရဲ့.. ငါတို့ တီလုပ်ပီက နင်တို့ဆီကထွက်တဲ့ ကုန်ကြမ်းတွေ ဘုန်းဘလအောသွင်းပြီး ကုန်ချောအဖြစ် ပေါချောင်ကောင်း ပြန်ရောင်းစားပေးတာ နင်မသိလေရော့သလား။ နင်တိုဆီမှာ ငတ်ပြတ်နေတဲ့ မြန်မာမတွေကို ငါတို့ဆီက မုန်ယိုနေတဲ့ နွားသိုးကြိုးပြတ်တွေနဲ့ (အဲဒီထဲ နင်လည်ပါတယ်) အာဝါဟ ဝိဝါဟ လုပ်ပေးတယ်။ တရုတ်မ လိုချင်ရင်တော့ ရွှေထုပ်ပိုက်လိုက် ရင်ရမယ်။ နင်တို့နိုင်ငံက ကိုးကန့်၊ ဝတွေကို ငါတို့တီလုပ်ပြည်က ထောက်ပံ့ပေးထားရတာ တနှစ်တနှစ် ဘယ်လောက်ကုန်တယ်မှတ်လဲ၊ သူတို့ကို အုပ်စုလိုက် မြန်မာပြည်တွင်းကို ရွှေ့ပြောင်းတုန်းက နင့်အဘ သွားလေသူ မောင်ခင်ညွန့်က တပြားတချပ်မှ မပေးလို့ ငါတို့အိပ်စိုက်ခဲ့ရတာ နင်သိလို့လား။ အခုဝနဲ့ နင်တို့မြီမာအစိုးရနဲ့ ညှိနေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး စာချုပ်အသစ်ကနေ ရမဲ့ တလ သစ်တန်ချိန်နှစ်သောင်းနဲ့ သတ္တုတူးဖော်ခွင့်ဆိုတာ စိုက်ထားတဲ့ငွေရဲ့ အတိုးတောင် မကာမိဘူး အေကိုက်မဲ့တေနာရဲ့..။
ခုလို မဖတ်ရသေးတဲ့သူတွေဖတ်ရအောင် ကူးတင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်
သို့သော်လည်း.. ဒါပေမယ့်ပေါ့လေ.. ဧရာဝတီ သတင်းဌာနကနေတစ်ဆင့် ကူးယူထားတယ်ဆိုတာတော့ ၀န်ခံရေးသားချက်လေး ပါစေချင်တာပေါ့လေ.. ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ပေါ့လေ.. ဒီဆိုက်မှာ အောက်ကူးဆိုတဲ့သူကြီးကိုလည်း အတော်လေးပြောပြီးပါပြီ.. စာဖတ်သူတွေ ဖတ်စေလိုတဲ့ စေတနာရင်းကို နားလည်ပေမယ့်လည်းပေါ့လေ သူများဆိုက်တွေက သူတို့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ဒီဆိုက်က ကူးတင်တဲ့ ဆိုက်ကြီးဖြစ်နေမှာလားဆိုပြီးတော့ပေါ့လေ အဲလိုပြောကြမှာလဲ စိုးတယ်ပေါ့လေ..
ပြောရရင်ပေါ့လေ.. ဘာမှတော့မဆိုင်ပါဘူး.. ဘာမှမဆိုင်ပေမယ့်လည်း အမြင်မတော်ရင်တော့ ထ ထပြောတတ်တာ အကျင့်ဖြစ်နေတာတော့ ခွင့်လွှတ်ပါလို့ တောင်းပန်ရင်းနဲ့ အကြံပြုအပ်ပါကြောင်း..
အဲ.. ဘွားတေးပေါ့လေ….။ ကျွန်တော် fb ထဲမှာ ၀င်လာတဲ့ သတင်းကို စာဖတ်သူတွေ ဖတ်ချင်စောနဲ့ မြန်မြန်တင်ပေးလိုက်တာ… ကျွန်တော် စာတင်တုန်းက ကွန်နက်ရှင်မကောင်းဘူး။ html view အနေနဲ့ပဲ မြင်ပြီး ဆွဲတင်ပေးလိုက်တာ။ သတင်းထဲမှာလဲ ဧရာဝတီကပြောသည် ခဏခဏပါနေတော့ ကိုယ်လဲ ပေါ့ဆပြီး မထည့်လိုက်တာနေမယ်။ ခုတော့ အက်မင်တွေက ကျွန်တော့် အစားထည့်ပေးလိုက်တာ တွေ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။ ခုလို အမြင်မတော်တာ ၀င်သတိပေးတဲ့ မောင်လူရှူံးကိုလဲ ခေ့ါခွန်းခရပ်ပေါ့လေ….
((ကြောင်ဆိုတာ အဖြူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အမဲဖြစ်ဖြစ် အဓိကက ကြွက်ခုတ်သတ်ဖို့ပါပဲ)
သိမ်မွေ့နုနယ်တဲ့ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပိုင်းရောက်ပြီ ဆိုပါတော့။ မြန်မာလူထု နဲ့ တတ်သိပညာရှင်အတော်များများက မကြိုက်ပါဘူးလို့ တိတိကျကျပြောထား ပါလက်နဲ့တရုတ်အစိုးရက ရှေ့ဆက်တက်သံ့မလား။ ခုချိန်မှာ လူထုနဲ့အစိုးရ ပခုံးချင်းဖက်ရမဲ့အချိန်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒေါ်စု ရဲ့ ပညာသားပါလှတဲ့ သဘောထားကို အကြိုက်တွေ့မိပါရဲ့…ဘာတဲ့ …လူထုအများစုရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျောခြင်းဟာ ကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်လို့ကြိုဆိုပါတယ်…ဆိုတာ။
စီးပွားရေး သမားဆိုတာမျိုးကတော့ တော်ရုံတန်ရုံ လက်လျှော့တတ်တဲ့လူစားမဟုတ်ပါဘူး။
တရုတ်အစိုးရနဲ့ မြန်မာအစိုးရရဲ့ မြစ်ဆုံဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်တွက်ချက်မှု အစီရင်ခံစာတွေ ဟာ ပျော့ကွက်ဟာကွက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဓိက ကတော့ ပါတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး နဲ့ ဒေသ နဲ့ မြစ်ကျောတလျှောက် အနာဂါတ်မှာ ကျရောက်လာမဲ့ အပြစ်တွေ ကို စီမံကိန်းစပြီးကာ မှာ စတင်လေ့လာတွက်ချက်ခြင်းဟာ မဟာအမှားကြီးတခုပါဘဲ။ မရိုးသားဘူးလို့ဆိုရမှာပေါ့။
တရုတ်အစိုးရ ရဲ့ ပြစ်တင်ဝေဖန်မှု ကို အချိန်ကကုစားသွားမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်စိုးမှုကို ထိရောက်နိုင်စရာမမြင်ကြောင်းပါခင်ဗျား။
တရုတ်လို ရှာ၊ ကုလားလို စု ၊ ဗမာလို မဖြုန်းနဲ့တဲ့
တရုပ်ကတော့ သူတို့မရမှာကို ကျားကန်ပြောနေကြမှာဘဲ။
ဒီစီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်တာဟာ ပြည်သူတွေအတွက်တော့ ပထမဆုံးအောင်မြင်မှု ရရှိလိုက်တာပါပဲ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ အစိုးရက ပြည်သူတွေအပေါ်လိုက်ရောတာ ဒါပထမပဲလေ ။ တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ လည်းသဘောပေါက်သင့် ပါတယ် မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့ မရတော့ ဘူးဆိုတာကိုပေါ့ ။
ပြည်သူတွေကို တစ်ကယ်ကြည့်ရင် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ဖျက်သိမ်းရမှာပေါ့။
အခုက ရပ်ဆိုင်းတာ ဖျက်သိမ်းတာမဟုတ်သေးဘူး
ဒါပေမဲ့ ရပ်ဆိုင်းပေးထားတယ်ဆိုတော့ ပြည်သူတွေကို ကြည့်တယ်ပေါ့
ကိုလိုနီ ရဲ့meaning က အစုလိုက်နေထိုင်ခြင်းတဲ့။
စစ်အစိုးရပြောပြောနေတဲ့-နယ်ချဲ့ကိုလိုနီ လက်သစ်-ဆိုတာ ခေတ်သစ် နယ်ချဲ့ပြီး ဝင်ရောက် နေထိုင်သူတွေ ကိုဆိုလိုချင်ပုံပဲ။
အဲဒီ အသုံးအနှုံး ကို ကျွန်တော်တို့နဲ့ခြံစည်းရိုးပဲ ခြားတဲ့တိုင်းပြည် ကိုမခေါ်ဝေါ်ပဲ မိုင်ထောင်ချီဝေးတဲ့တိုင်းပြည်တွေကို စစ်အစိုးရက သွားစွပ်စွဲခဲ့တာနား မလည်စရာပဲ။
ဒီလောက်ဝေးတဲ့နေရာက ကျုးကျော်ဖို့ အကြောင်းမရိုပဲ လဲလုပ်လို့မရသလို အကြောင်းရုာဘို့လဲမလွယ်ဘူး။
ကပ်နေတဲ့သူကလုပ်ချင်ရင် ဆီ အပေါက်ရုာသလို လွယ်တယ်။
အဲဒါကို စစ်အစိုးရကဟိုဟာသွားရက်တော့ ဟိုအစိုးရက ဟိုဟာ ချလွှတ်လိုက်တာပေါ့။
ဘယ်ဟာကပိုကြောက် ရမှာ မ ခွဲခြားနိုင်ဘူးလား??????